Translator Newsletter: Hehy amin’ny fandikan-teny, Orinasan’ny fandikan-teny sy ny hafa maro! · Global Voices teny Malagasy
Translator Newsletter: Hehy amin'ny fandikan-teny, Orinasan'ny fandikan-teny sy ny hafa maro!
Voadika ny 24 Jona 2019 10:24 GMT
Miarahaba ny mpikambana rehetra ato amin'GV!
Tongasoa eto amin'ity fizarana Taratasim-baovaon'ny mpandikateny amin'ity herinandro ity indray! Androany isika dia hiresaka momba ny…
Ahoana no fomba hianarana fiteny vaovao
Pikantsary nalaina tao amin'ny blog.ed.ted.com
Niara-nivory ireo olona mahafinaritra ao amin'ny Tetikasa Fandikan-teny Misokatra mba hanome antsika toro-hevitra sasantsasany amin'ny fomba fianarana fiteny vaovao! Ary iza no mahay kokoa manome torohevitra momba ny fiteny ankoatra ireo namana mpandika teny? Tsindrio ato raha te-hamaky ireo toro-hevitra tsara avy amin'izy ireo sy hizara ny toro-hevitrao manokana amin'ny vondrom-piarahamonina GV amin'ny alalan'ny famaliana ity lohahevitra ity.
Miasa miaraka amin'ireo orinasan'ny fandikan-teny
Pikantsary avy amin'ny http://atasavvynewcomer.org
Raha mpandika teny matihanina mahaleotena ianao, dia fantatrao fa misy fanamby ny miasa amin'ny orinasa. Ho antsika izay manomboka eo amin'ny sehatry ny fandikan-teny, “Nanoratra ity lahatsoratra bilaogy mahafinaritra ity ny Savvy Newcomer”, izay manasongadina ny sasany amin'ireo tombontsoa amin'ny fiarahamiasa amin'ireo orinasa mpandika teny, anisan'izany ny tsy fandaniam-potoana amin'ny fitadiavana ny mpanjifanao manokana sy ny fampidirana ny tenanao ho ao anatin'ny tsena. Jereo izany ary ampahafantaro anay izay eritreritrareo!
Tombatombana taona 2016 amin'ny indostrian'ny fandikan-teny
Pikantsary tao amin'ny http://www.k-international.com
Amin'ny fiatombohan'ny taona vaovao, tsy misy milaza izay mety hitranga amin'ny sehatry ny fandikan-teny. Manantena isika rehetra fa ho taona tsara izany ary nanao ny fanombatombany manokana tao amin‘ity lahatsoratra ity ny k-international. Hitombo ve ny tinady ho an'ny votoaty amin'ny fiteny maro samihafa? Hanimba sa hanakana antsika ny teknolojia? Ny fotoana ihany no afaka miteny, fa amin'izao fotoana izao, dia vakio izany ary ampahafantaro anay izay eritreritrareo hitranga amin'ity taona ity!
Hehy amin'ny fandikan-teny
Pikantsary avy amin'ny http://www.aboveaverage.com
Amin'ny maha-mpandika teny, dia fantatsika fa sarotra ny maka vazivazy rehefa miditra fiteny iray mankany amin'ny iray hafa. Mitety izao tontolo izao ilay Amerikana mpanao hatsikana Brooks Wheelan mba hahalalany izay mahatsikaiky any amin'ny firenena hafa raha ampitahaina amin'ny any Etazonia.
Ny mampihomehy manerana izao tontolo izao? Milaza ny olona fa misy ny fitenim-pitiavana mahasahana izao tontolo izao, saingy ahoana kosa ny momba ny hatsikana? Mihomehy ny olon-drehetra eto an-tany, nefa misy ve ny iraisana amin'ny mampihomehy azy ireo? Hitety izao tontolo izao ilay Amerikana mpanao hatsikana, Brooks Wheelan mba hitady ny valiny. Hihaona amin'ireo mpanao hatsikana avy any amin'ny firenena tsirairay izy, hianatra ny vazivazy ankafizina indrindra any amin'ny firenena, ary hiresaka amin'ny mponina any an-toerana mba haheno izay eritreritr'izy ireo fa mampihomehy (na tsia) momba ny hatsikana Amerikana.
Efa tany Alemania, Danemark, ary Frantsa izy. Vakio bebe kokoa ary jereo ato ireo fizarana telo voalohany!